Mon Petit Avatar: My Garden Restaurant - shooting
I couldn’t help feeling sorry for those friends who visit my blog from time to time. The reasons are quite obvious: all the posts are just personal and barely entertaining not to mention informative, inspirational, etc. Thus I really want to thank everyone for kind visits and here comes another ordinary post. I noticedashooting outside My Garden Restaurant while I was sitting and taking pictures of my drink. Since my curiosity superseded my hunger, one minute I was waiting for my food and the next I was in the middle of shooting. I waited until they finished taking the specific scene and asked permission to takeafew pictures. As I told my fried before, I am “no great shakes” blogger and not surprisingly, I have no idea who is the director, and the title of the movie. But it wouldn’t hurt anyone by posting those pictures in my blog, well, let’s hope so, eh?
Posted by Mon Petit Avatar at 4:41 PM
အဲဒီလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ဘလော့ဂ်တွေမှာက အနည်းနဲ့အများ ပါစင်နယ်လ် ပါကြတာ ချည်းပါပဲ၊ သာမန်ဘလော့ဂ်ကို ထားဦး.. အနုပညာရှင်၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ ဝန်ကြီး စတဲ့ လူတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာတောင် Personal touch တစွန်းတစ တွေ့ရသေးတာပဲ၊ အခုပို့စ်မှာလည်း ရှုတင် အကြောင်း ပုံတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ၊ Behind the scene ဆိုတာ ကျနော်တို့ နေ့စဉ် မတွေ့နိုင်ဘူး မဟုတ်လား၊ မျှဝေတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ...။း)
Whatever. I always enjoy reading your posts.
Hey..I know I know them. But not their names only their faces. LOL.
အရည်မရ အဖတ်မရတွေအတွက် အားနာမိတာ အမှန် ကိုညီလင်းသစ်။
Ioraရေ နိုင်းနိုင်းနဲ့ချစ်စနိုးဦးပါ။ နိုင်းနိုင်း ကိုမကြာခဏမြင်ဘူးပေမည့် ချစ်စနိုးဦးတော့ဒါပထမဆုံးပဲသိလား။